Fiakaram-pitaterana ankatoavina IMM nankatoavina ..! Ny Tariff vaovao dia manomboka ny alatsinainy
Nanapa-kevitra ny hanao fanovana vaovao vaovao i UKOME noho ny fiakaran'ny vidin'ny vidin'ny fitateram-bahoaka izay tsy niova nandritra ny 3 taona. Amin'ny tarika vaovao hotanterahina ny alatsinainy 10 febroary; tapakila elektronika feno [More ...]
Ho azon'ireo mpampiasa Istanbul hampiasa ny finday ho toy ny karatra Istanbul
Miaraka amin'ny rindranasa vaovao novokarin'ny orinasa mpiara-miasa ao Istanbul Metropolitan (İBB) orinasa BELBİM A.Ş., ireo mponin'i Istanbul dia ho afaka haka fiara fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny rafitra matrix data amin'ny finday. TUYAP nokarakarain'ny Atsinanana fizahan-tany Iraisam-pirenena Atsinanana sy fizahan-tany (EMITT) [More ...]
Dingana iray manan-danja ihany koa ny fanatanterahana ny fampanantenan'ny toplu fidirana malalaka amin'ny fitateram-bahoaka any amin'ireo reny misy zaza 0-4 bulunan, izay anisan'ireo fampanantenan'ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu. Noresahina nandritra ny fotoam-pivorian'ny Fivorian'ny IMM omaly [More ...]
Istanbukart Queue Miaraka amin'ny Fitaovana Mobile Trading Point Tools
Mba hampihenana ny haingam-pamoronana izay mamorona filaharam-potoana ao amin'ny foibe Istanbulkart, ny IMM dia mampiditra ireo 'Mobile Trading Point' fitaovana. Ny foiben'ny fampiharana finday, izay napetraka voalohany tao Üsküdar, dia eo amin'ny 120 eo ho eo isan'andro. [More ...]
Andro voalohan'ny taom-baovao amin'ny Istanbul fitaterana maimaim-poana
Ny fiara fitateram-bahoaka any an-tanànan'i Istanbul Metropolitan dia hanome serivisy maimaimpoana amin'ny fety ara-pivavahana sy ofisialy rehetra amin'ny taona 2020, andro fanadinana ary fanokafana sekoly. Fitaterana any Istanbul amin'ny andro voalohany amin'ny Taom-baovao [More ...]
Filazantsara amin'ny Istanbulites amin'ny taom-baovao!
Filazantsara amin'ny Istanbulites amin'ny taom-baovao! ; Ny fiara fitateram-bahoaka an'ny IMM dia hanome serivisy maimaimpoana amin'ny fety ara-pivavahana sy ofisialy amin'ny taona 2020, andro fanadinana ary fanokafana sekoly. Voalohany vaovao [More ...]
Istanbul dia miresaka momba ny Kongresy mikambana amin'ny fanaterana dia manomboka rahampitso
Istanbul Metropolitan Munisipaly, iray amin'ireo olana lehibe indrindra eto an-tanàna, ny resaka fitaterana dia eo ambony latabatra. Ny kongresy misy ny lohahevitr'i İstanbul Miresaka momba ny Fitaterana Istanbul ağı dia hosokafin'ny Filohan'ny Metropolitan Istanbul Ekrem İmamoğlu amin'ny 17-18 Desambra [More ...]
Ny Kongresin'ny Fifandraisana any Istanbul 17-18 dia hotanterahina amin'ny volana Desambra
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan, no nanatontosa ny kabary famaranana ny «atrikasa fitaterana goavambe» izay nifanakalozana hevitra momba ny toe-javatra ankehitriny, fanatsarana ary soso-kevitra vahaolana amin'ny rafitra fitateram-bahoaka. İmamoğlu hoy, adan Raha tsy manadino fa mpanjifanay no mpanjifa, [More ...]
Fitateram-bahoaka malalaka eto Istanbul amin'ny andron'ny Repoblika
Fitateram-bahoaka malalaka eto Istanbul amin'ny andron'ny Repoblika. 29 Oktobra Day 96. Nanomana ny hankalaza ny taona miaraka amin'ny lanonana mahafinaritra ny IMM, ny fitateram-bahoaka amin'ity fetim-pirenena ity dia nanapa-kevitra ny hanome serivisy malalaka. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Eo amin'ny latabatra ny Rafitry ny lalamben'i Istanbul!
Ny Kaominina Metropolitan Istanbul dia nanao atrikasa Rail Systems izay nomena ny fandraisana anjara malalaka avy amin'ny akademisiana ka ny solontenan'ny sehatra. Ny atrikasa dia nifantoka tamin'ny asa vita hatreto amin'ny rafi-pitaterana any Istanbul sy ireo fepetra tokony ho raisina aorian'izany. [More ...]
Istanbulkart fihenam-bidy ho an'ny mpianatra tsy mahay mandresy amin'ny oniversite
Ny faritry ny fitaterana fihenam-bidy dia natomboka tamin'ny fandraisana an-tanana ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu. Nanapa-kevitra ny Filankevitra IMM fa ireo mpianatra izay tsy afaka mitoetra ao amin'ny departemanta iray amin'ny fanadinana oniversite ary ireo mpampianatra miasa eo ambany fifanarahana ao amin'ny minisiteran'ny fampianarana dia hahazo tombony amin'ny karatra manga. [More ...]
Nosokafana ireo sekoly tany Istanbul, tsy nisy olana ara-dalambe
Tany Istanbul, akaikin'ny mpianatra 3 tapitrisa ary efa ho arivo ny mpampianatra 200 no nanao ny fanombohan'ny kilasy androany. Ao an-tanàna izay misy ny fitateram-bahoaka dia tsy andoavambola, omena ny serivisy serivisy hitondrana ny ray aman-dreny. Olom-pirenena, ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu'nun [More ...]
9 Septambra alatsinainy Ho afaka malalaka any Istanbul ny fitateram-bahoaka
Ny 9, manokatra sekoly, dia hanome serivisy fitateram-bahoaka malalaka any Istanbul amin'ny volana septambra ny alatsinainy eo anelanelan'ny 06: 00 - 14: ora 00. 2019-2020 Ny taom-pianarana 9 septambra 2019 dia manomboka ny alatsinainy. Olona 16 tapitrisa [More ...]
Manainga ny fitateram-bahoaka hanohitra ny fitohanan'ny sekoly ny IMM
Ny masoivoho Metropolitan Istanbul (IMM) 2019-2020 Filoham-pirenena Ekrem İmamoğlu nanazava ny fepetra raisina tamin'ny taom-pianarana, ny fitateram-bahoaka dia hanome serivisy serivisy sy serivisy entan'ny fiara mitondra ny ray aman-dreny maniry ny andro voalohany, hoy izy. ny olom-pirenena [More ...]